Dibadbaxyo Ballaadhan Oo Ka Dhacay Dalka Aljeeriya Kaddib Doorashadii Hoggaamiyaha Cusub Ee La Doortay – somalilandtoday.com
Dibadbaxyo Ballaadhan Oo Ka Dhacay Dalka Aljeeriya Kaddib Doorashadii Hoggaamiyaha Cusub Ee La Doortay
(SLT- Aljeris)-Tobannaan kun oo qof ayaa waxa ay iskugu soo baxeen waddooyinka caasimadda Aljeeriya ee Aljeris, iyagoo ka mudaharaadaya natiijooyinka doorashadii madaxtinimada ee Khamiistii la qabtay.
Waxa ay ku qeylinayeen hal ku dhegyo ay kaga soo horjeedaan ninka doorashada ku guullaystay, waa ra’iisul wasaarihii hore Abdelmadjid Tebboune, kaas oo hore daacad ugu ahaan jiray hoggaamiyihii xilka laga qaaday Abdelaziz Bouteflika.
Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay dalbanayaan in gebi ahaanba meesha laga saaro qaabka ay ku dhisan tahay siyaasadda dalkaas.
Maalintii codbixinta waxaa dalkaas ka dhacay dibadbaxyo iyo baaqyo ah in la qaadaco doorashada.
Mr Tebboune, oo 740jir ah, ayaa waxa uu ku guulaystay 58%, taas oo ka badbaadisay inuu aado wareeg labaad. Hasayeeshee isaga iyo afarta musharax ee kale ayaa waxaa lagu dhaleeceeyeen inay aad ugu dhawaayeen maamulkii Mr Bouteflika.
Madaxweyne Bouteflika ayaa xilka banneeyay kaddib dibadbaxyo ballaaran oo dalkaasi oo dhan ka dhacay.
Hasayeeshee dibadbaxyada loogaga soo horjeedo dowladda ayaa sii socday tan iyo markaas oo joogto ayey ahaayeen.
“Codka waa lagu shubtay. Doorashooyinkiina waxba nagama gelin madaxweynihiinana nama maamuli doono,” waxaa sidaasi ku qaylinayay dibadbaxayaal Jimcihii isugu soo baxay badhtamaha magaalada Aljeris.
“Tebboune waa uu ka xun yahay Bouteflika,” ayey tidhi mid ka mid ah dibadbaxayaasha oo lagu magacaabo Meriem oo ah 31-jir dowladda u shaqeysa. “Maynaan codayn mana tanaasuli doono.”